what, when, why: मोबाईलले कँगाल
दिपक आफ्नो साथीसँग : हे भगवान यो मोबाईलले त मलाई कँगाल बनाउने भयो ।
साथी : किन र ?
दिपक : बारम्बार देखाउछ बेट्री लो बेट्री लो अहिले सम्म २५ वटा बेट्री फेरी सके ।
स्वास्नी : यहाँ किन उभिराखेको ??
लोग्ने : शेरको शिकार गर्न जान लागेको ।
स्वास्नी : अनी जानु नि त किन उभिराखेको त ?
लोग्ने : देखिनौ बाहिर कुकुर बसी राखेको छ ।
मान्छे : टेलिफोन अफिस बाट बिल तिरेन भने लाइन काटिदिन्छु भनेर ....
अनिल आफ्नो घर अगाडिको बाटोमा नाङै डौडी रहेको देखेर सुनिलले भन्यो ।
सुनिल : अनिल किन तिमी नाङै डौडेको ? तिमी लाई लाज लाज्दैन ??
सुनिल : तिमी आज चाडै घर आयौ त्यसैले ....
स्वास्नी : उ त्यो रक्सी खाइरहेको मान्छे सँग मैले दश बर्ष अगाडि बिहे क्यन्सिल गरेको थिए ।
लोग्ने : ओहो यती लामो खुशीयाली ??